Ceerigaabo: Qoys Tabaalaysan Oo Taakulo Kaaga Baahan | Gacanlibaaxnews
Ceerigaabo: Qoys Tabaalaysan Oo Taakulo Kaaga Baahan
January 9, 2020 - Written by C M
Ceerigaabo-(GLN): Hooyada qoysku way indho la’dahay, aabbaha na waxa ku dhacay xanuunka faalliga, oo lug iyo gacan ayuu ka haleelay. Qoysku, waxa uu ka kooban yahay toban carruur ah. Hooyada qoyska indho la’aanta waxa u raaca xanuunno ay ka mid yihiin: macaan, dhiigkar, gaastarii, beersubag iyo xanuunno kale.
Fadlan, ciddii awoodi karaysaa, ha caawiso qoyskan oo taageero dhaqaale u baahan.
Hooyada iyo cannuurta oo wada fadhiya. Sawirka: Oodweynenews